Warka SONY: Soo Saarida, Telefoonada, Kiniiniyada, Xidid iyo Inbadan - Androidsis | Androidsis
Sony waa shirkad laga leeyahay Japan, waxaa la aasaasay 1946 waxayna ku jirtaa qaybta taleefanka tan iyo 2001. Taleefoonnadeedii ugu horreeyay waxaa lagu bilaabay magaca Sony Ericsson, laakiin laga soo bilaabo 2012 waxaa loo soo saaray sidii Sony Xperia, oo ah nooc ay sii adeegsanayaan maanta. Dhamaan taleefannadooda waxay u isticmaalaan Android nidaamka qalliinka. Ka sokoow taleefannada casriga ah, shirkaddu waxay sidoo kale suuqyada ku soo bandhigeysaa kiniinno iyo dharka la gashan karo sida saacadaha casriga ah. Waxay sidoo kale leeyihiin xulasho weyn oo kaamirooyin, telefishanno, ama ciyaartoy muusig ah.
Telefoonada Sony ayaa caan ku ah tayadooda sare, iyada oo ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee ku jira qeybta sawir qaadista. Xaqiiqdii waxay sameeyaan dareemayaal badan oo ka mid ah noocyada ku jira Android maanta. Shirkad caan ku ah hal-abuurkeeda. Qaybtan waxaad ka heli doontaa dhammaan wararka, macluumaadka ama falanqaynta taleefannada ama aaladaha Sony.
Sony Xperia 10 III waxaa laga helay Snapdragon 690 iyo 6 GB oo RAM ah
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, Sony waxay soo saartay Xperia 10 II iyada oo ah taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah iyo ...
Sony Xperia 1 III wuxuu sii wadaa qaabeynta iyo qaabka caadiga ah
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee Bilaha 6 .
In ka yar usbuuc ka hor ayaan si faahfaahsan u ogaanay waxa uu noqon doono nooca saddexaad ee dhammaadka sarreeya ee Sony, ...
Maaddaama bilooyinku soconayaan tan iyo markii Google ay sii deysay nooca ugu dambeeya ee Android 11 ee loogu talagalay Pixel range, the ...
Faras weyn, soco ama ha socon. Oraahdaan ayaa si weyn looga adeegsadaa Spain (Ma aqaano in looga isticmaalo wadamada Latin Amerika) ...
Sony Xperia 5 II wuxuu bilaabaa inuu helo cusboonaysiinta Android 11
Ka dib markii ay u soo bandhigtay cusbooneysiinta Android 11 Sony Xperia 1 iyo Xperia 5, soo saaraha Japan ayaa hadda ...
Sony waxay ku dhawaaqday taleefannada casriga ah ee ugu horreeya ee hela Android 11
by DaniPlay samee Bilaha 8 .
Nidaamka Android 11 ayaa dhawaan saddex bilood jirsan doona, in kasta oo aanu weli caalamiyeyn, haddana wuxuu u imanayaa taleefannada casriga ah ee kala duwan ...
Sony waxay ku dhawaaqeysaa mid ka mid ah taleefannadeeda cusub ee loo arko inay yihiin kuwo heer sare ah si ay ula yimaadaan processor-ka awoodda badan ee Qualcomm, waa ...
by Nerea Pereira samee Bilaha 11 .
Waxaa jira wax ka yar Sony Xperia 5 II si uu u arko iftiinka. Waxaa la filayaa in taleefanka soo socda ee ...
Si tartiib tartiib ah soo-saaraha Japan ayaa na tusaya horumarkiisii ​​ugu dambeeyay ee qaybta taleefanka. Dhowr kahor…
Waqtigan xaadirka ah iibsashada Sony Xperia 1 II ee Japan waa inay noqotaa mid ka mid ah labada hawl wadeen ee ugu muhiimsan ...
Kaamiradda Xperia X waxay la xanuunsan tahay cilad maamusha kuleylka kuleylka
Farqiga weyn ee waxqabadka ku saabsan Xperia Z5 oo leh Android 5.1 Lollipop iyo Android 6.0 Marshmallow